Taliyaha Cusub ee Booliska Puntland Oo Xilka la wareegaya. – SBC
Taliyaha Cusub ee Booliska Puntland Oo Xilka la wareegaya.
Col. C/risaaq Maxamuud Yuusuf Afgaduud Oo Dhawaan Loo magacaabay Taliyaha Ciidanka Booliska Puntland ayaa maanta la wareegidoona xilka cusub ee uu dhawaan usoo magacaabay madaxweynaha Puntland.
Masuuliyiin kala duwan ayaa la filayaa iney Ka qeybgalaan Xafladda Xilwareejinta Taliyihii Hore ee ciidanka Booliska Puntland Taas Oo Goordhow Ka dhici doonta Magaaladda Garowe ee xarunta Puntland.
Cabdi Xirsi Cali Qarjab Wasiirka amniga Puntland ayaa la filayaa inuu ka qeybgallo munaasabada uu xilka kula wareegayo taliyaha cusub laguna sagootinayo taliyihii hore ee ciidanla booliska Puntland General Maxamed Siciid Jaqanaf.
Munaasibadda Xilwareejinta ayaanna la filayaa in Taliyihii Hore Uu Ku soo bandhigo waxqabadka mudaddii uu xilka hayay Waxaanna Uu Halkaasi ku wareejin doonna Furayaasha Xafiisyadda Taliska iyo Warbixinno kale oo ka hadlaya Marxaladda ciidanka Booliska Puntland.
Taliyaha Xilka la wareegaya ayaa waxaa magacaabay madaxweynaha Puntland Dr. Cabdiwali maxamed Cali Gaas waxaanna intaan lamagacaabin ka hor uu Kamid ahaa Saraakisha Ku sugnaa gudaha Puntland Kuwaas oo aan wax xil ah heyn.